TCL TS6110, ụzọ dị ọnụ ala iji wulite ụlọ obibi ihe nkiri na Dolby Audio | Akụkọ akụrụngwa
TCL TS6110, ụzọ dị ọnụ ala iji wuo ụlọ ihe nkiri na Dolby Audio
Miguel Hernandez | 05/04/2021 10:00 | Emelitere ka 27/03/2021 19:57 | General, Nyocha
Na nbata nke Ogwe ụda site na ọdụ ụgbọ mmiri HDMI na ya evolushọn na ụfọdụ pairings na ọgụgụ isi ike, ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ na-efego ụlọ ihe nkiri sistemụ na a ukwuu dị ọnụ ala karịa price, ihe na ozugbo, na "analog" oge bụ ihe na a na-eri fọrọ nke nta ka prohibitive.
N’ụlọ a anyị na-achọ igosi gị ụdị ndị ọzọ niile, ma dị anya site na ngwaahịa ndị dị elu nke mere ka anyị gosipụta gị na mpaghara -lọ-Cinema, Anyị na-ewetara gị nyocha miri emi nke ụlọ ihe nkiri ihe nkiri TCL TS6110, ka anyị hụ etu o si eme na ihe atụmatụ ya pụtara ìhè.
2 Njikọta na nhazi
TCL bụ akara amaara ama na ngalaba mgbasa ozi, ọ bụ ezie na anyị ahụla ngwaọrụ mkpanaka nke akara ahụ mepụtara, nke bụ eziokwu bụ na a mara ya mgbe niile maka igwe onyonyo ya na uru dị mma maka ego yana maka ngwaahịa ya, nke ikpeazụ ịbụ ndị taa wetara anyị ebe a. N'okwu a, TCL iji dozie ọnụahịa ahụ ruo na nke kachasị elu anaghị ahapụkarị atụmatụ a na-anabata, nke ahụ bụ ihe mere na ngalaba a nke anyị nwalere.
Nda ụda: 800 x 62 x 107mm
Subwoofer nke: 325 x 200 x 200m
Ogwe ntụ: 1,8 n'arọ
Subwoofer arọ: 3 n'arọ
Emere ya na plastic, na akwa akwa akwa akwa n'ihu, ọ nwere ezigbo njide na ala iji belata mkpọtụ. Akụkụ dị elu nwere onye na-ahọrọ multimedia tactile, ma n'azụ akwa ahụ, a na-ezobe panel LED nke agba nke ga-egosi oke na ụdị njikọ. Na azụ bụ njikọ ndị anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Ikike ekweghị ka Sub, ọ bụ ezie na na nke a na a kwesiri ngosi elu ibu karịa ụda mmanya na roba pad na-ebelata njikọ.
Anyị na-amalite na ngalaba njikọ, Nke mbụ, anyị na-egosi na ogwe ụda ahụ na-agụnye sistemụ njikọ ikuku Bluetooth 4.2, na-echefughi eziokwu ahụ bụ na isi njikọ ya ga-esite n'ọdụ ụgbọ mmiri HDMI na azụ ma ọ bụ, ghara ime nke ahụ, ntinye ntinye anya. Agbanyeghị, maka ndị nwere ike ịchọta, a na-etinyekwa ọdụ ụgbọ USB nke ga-enye anyị ohere ijikọ isi mmalite ọdịyo yana ọbụlagodi njikọ 3,5-millimita AUX ochie ma ọ dịkarịa ala.
Ọdụ ụgbọ mmiri USB
Sub maka akụkụ ya nwere njikọta akpaka na ikuku zuru oke na ogwe ụda site na otu bọtịnụ pairing nke ga-akwụsị ire ọkụ mgbe njikọ ahụ guzobere. Nke ahụ ga-azọpụta anyị eriri, ọ bụghị eriri ike, nke ga-anọpụ iche. Nhazi ahụ dị mfe, ebe ọ ga-ebute ụzọ ntinye na ntanetị site na njikọ HDMI, agbanyeghị, ọ ga-adị mkpa mgbe niile iji njikwa ogwe ụda maka ọrụ ndị ọzọ, karịa ịwelite ma wedata olu nke telivishọn, nke anyị nwere ike iji otu njikwa.
E kwesiri iburu n'uche na A na-etinye brackets abụọ na ngwugwu nke ga-enyere anyị aka imeghari ụda ụda ozugbo na mgbidi, yana mpempe akwụkwọ nke ga - abu ihe osise mgbe ị na - eme oghere kwekọrọ na mgbidi. Ihe dị ịtụnanya na-atụle ọnụahịa nke ngwaahịa a.
Mgbe anyị kwuchara ihe niile a, anyị na-amalite ikwu nke ahụ ọdụ ụgbọ mmiri HDMI nwere teknụzụ ARC, ee, anyị na-anọ na HDMI 1.4. Maka akụkụ ya, ọ ga-enye anyị ohere ịmekọrịta na njikwa telivishọn ozugbo na ogwe ụda, yana izipu ma nata ozi n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ, nke ahụ bụ uru a ma ama. Maka akụkụ ya, ụda ụda a enweghị njikọ ikuku ọ bụla dị elu.
Anyị nwere 95db kachasị ikike kwekọrọ na ike ya kachasị 240W. Ọ bụghị ihe ọjọọ maka ụda ụda nwere ibu dị arọ dị otu a. Na ndakọrịta larịị anyị nwere 5.1 Virbyalization ga - enye Dolby, eziokwu bụ na n'agbanyeghị eziokwu na ọdịyo na-ukwuu dissected n'ihu, virtualization-arụ ọrụ ya na bụ nnọọ obi ụtọ na-enweghị ịbụ kwesiri ngosi. O sina dị, iwu a ga enyere anyi aka ichota uzo ozo ato ngosiputa dika: Cinema, TV na egwu.
Ihe kachasị mkpa n'ụdị ngwaahịa a bụ ezigbo ọdịyo mgbe niile, ọkachasị mgbe anyị na-ekwu maka ọnụọgụ ego dị ala, ebe anyị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla. Ihe bụ eziokwu bụ na n'okpuru 150 euro, ụda ụda a na-akwado, karịsịa maka mgbakwunye. Ọ na-enye anyị ezigbo ọfụma na bass nwere ekele maka subwoofer nọọrọ onwe ha, Ihe mmadụ ga-atụ anya n'aka ụdị ngwaahịa ndị a, agbanyeghị, a na-etinyekarị ha n'ihi na bass "na-ekpuchi" ntụpọ ndị ọzọ dị mma na ogo ọdịyo, ihe mmadụ ga-atụ anya ya.
Da ahụ dịtụ ntakịrị mgbe anyị na-ekwu maka telivishọn na egwu, ntakịrị ihe dị ike na-efu, mgbe ahụ ị chetara ọnụahịa ma cheta na enwere ike ịrịọ ntakịrị. N'ihe banyere mmeputa egwu, a na-agbachitere ya n'ụzọ doro anya, agbanyeghị mgbe a bịara n'ịkpọ fim ụfọdụ bass nwere ike izochi mkparịta ụka ahụ, na nke ahụ bụ nsogbu karịsịa na abalị, na ikpe ị ga-egwu na preset nhazi ụdịdị na remote.
Na mpempe Anyị na-ahụ ngwaahịa dị oke mma na-atụle oke ọnụahịa ya, ọ ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ụlọ ihe nkiri nke ụlọ n'ọnọdụ dị mma yana ọbụnakwa tinye onwe anyị n'ọkwa ọdịyo dị ike. Ugboro ole na ole na-abịakwute m na ọnụego ọnụahịa a nke gụnyere mgbidi mgbidi, subwoofer wireless dị iche, na HDMI ARC. ị nwere ike lee Amazon anya site na euro 150, na nke onwe TCL weebụsaịtị.
Ihe na: 5 April 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 27 March nke 2021
Nnọọ mara ihe na imewe
Easedị mfe nke nhazi
Independent subwoofer na Dolby Audio 6 dị mma
Obere ụda ewepụghị
Bass nwere ike ijikọ mkparịta ụka
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » TCL TS6110, ụzọ dị ọnụ ala iji wuo ụlọ ihe nkiri na Dolby Audio
Sonos Roam, obere ma na-eme ihe ike [Nyocha]